Asa 4 - Ny Baiboly
Asa toko 4
Ny nisamborana an'i Piera sy Joany ary ny nanadinan'ny lehibe azy - Ny nandraran'ny Jody ny Apostoly tsy hitory an'i Jesoa - Ny vavaka nataon'ny kristianina - Ny toetra masina nataony.
1Raha mbola niteny tamin'ny vahoaka Piera sy Joany, dia indreo tonga ny mpisorona maro, sy ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly, ary ny Sadoseana, 2fa sosotra izy ireo noho ny nampianaran'izy roa lahy ny vahoaka sy nitoriany ny fitsanganan'ny maty efa hita tamin'i Jesoa-Kristy, 3ka nosamboriny izy ireo, sy nataony an-tranomaizina ambara-pahamaraina ny andro; fa efa hariva ny andro tamin'izay. 4Maro anefa tamin'izay nandre ny tenin'izy ireo no nino, ka tonga dimy arivo ny isan'ny lehilahy.
5Nony ampitso, dia nivory tao Jerosalema ny mpanapaka, ny loholona, ny mpanora-dalàna, 6ary Ana lehiben'ny mpisorona, Kaifa, Joany Aleksandra, mbamin'ny havan'ny mpisorona rehetra, 7ka nasainy nentina teo anatrehany izy roa lahy, dia nanontaniany hoe: Amin'ny fahefan'iza, na amin'ny anaran'iza no anaovanareo izany? 8Tamin'izay Piera dia feno ny Fanahy Masina ka nilaza tamin'izy ireo hoe: Ry mpanapaka ny vahoaka sy loholon'Israely, 9raha ny amin'ny soa nataonay tamin'ilay lehilahy nalemy sy ny nahasitrana azy no anadinana anay anio, 10dia aoka ho fantatrareo rehetra sy ny vahoaka Israely rehetra fa ny anaran'i Jesoa-Kristy avy any Nazareta, izay nofantsihanareo tamin'ny hazo fijaliana, fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, no nahasitrana io lehilahy mitsangana eto imasonareo io. 11Iny Jesoa iny no vato narianareo mpanao trano, kanjo tonga vato fehizoro kosa; 12ary tsy misy hafa hahitana famonjena, fa tsy misy anaran-kafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona hahazoantsika famonjena.
13Dia gaga ry zareo nahita ity hasahian'i Piera sy Joany, satria fantany fa sarambaben'olona sy tsy nahita fianarana izy roa lahy, ary tandriny koa fa olona efa niaraka tamin'i Jesoa izy ireo; 14nefa tsy hitany izay hanoherany azy ireo noho ilay lehilahy sitrana hitany nitsangana teo akaikin'izy roa lahy. 15Ka dia nasainy niala teo amin'ny fivoriana aloha izy roa lahy, ary izy ireo kosa niara-nihevitra, 16nanao hoe: Inona no hataontsika amin'ireo lehilahy ireo? Raha ny fahagagana nataony aloha, dia fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema miharihary izany, ka tsy azontsika lavina; 17fa mba tsy hielezan'izany intsony amin'ny vahoaka kosa, ndeha horahonantsika izy, mba tsy hiteny amin'izany anarana izany intsony na amin'iza na amin'iza.
18Dia nantsoiny izy ireo ka noraràny mafy mba tsy hiteny sy tsy hampianatra amin'ny anaran'i Jesoa intsony. 19Fa namaly Piera sy Joany ka nanao tamin'izy ireo hoe: Tsaraonareo raha marina eo imason'Andriamanitra na tsia ny manaiky anareo mihoatra noho an'Andriamanitra; 20fa raha izahay, dia tsy azonay atao akory ny tsy hilaza izay efa hitanay sy renay. 21Tamin'izay, norahonany indray izy ireo, dia nalefany; fa tsy hitany izay hamaizany azy noho ny tahony ny vahoaka, izay efa nankalaza an'Andriamanitra daholo noho ny zavatra vao niseho teo, 22sady ity lehilahy sitrana tamim-pahagagana koa moa efa olona efa-polo taona mahery.
23Nony afaka teo izy roa lahy, dia lasa niverina tany amin'ny namany ka nanambara tamin'izy ireo izay nolazain'ny lehiben'ny mpisorona sy ny loholona taminy. 24Vao nandre izany kosa ireto rahalahy, dia niara-nivavaka tamin'Andriamanitra ka nanao hoe: Tompo ô! hianao no nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny ranomasina mbamin'izay rehetra eo aminy. 25Hianao no niteny tamin'ny Fanahy Masina sy tamin'ny vavan'i Davida razanay sady mpanomponao hoe: Nahoana no nitabataba ny firenena, ary no nisaina teti-dratsy foana ny vahoaka? 26Niodina ny mpanjakan'ny tany, ary niray tetika ny andrian-dehibe mba hanohitra ny Tompo sy ny Kristiny. 27Fa efa nikaon-doha marina tokoa teto amin'ity tanàna ity Heroda sy Pontsy Pilaty ary ny jentily mbamin'ny vahoaka Israely hanohitra an'i Jesoa Mpanomponao masina voahosotrao, 28ka hanatanteraka izay voatapaky ny tànananao sy ny lahatrao rahateo. 29Ary ankehitriny, Tompo, jereo ny fandrahonany, ary omeo ny mpanomponao ny hery hitory ny teninao amin-kasahiana tokoa, 30sady ahinjiro ny tànanao mba hisy fahasitranana sy famantarana ary fahagagana tanteraka amin'ny anaran'i Jesoa Mpanomponao masina. 31Nony avy nivavaka izy ireo, dia nihozongozona ny trano nivoriany, ary feno ny Fanahy Masina izy rehetra, ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin-kasahiana.
32Ary niray fo sy fanahy avokoa ny mpino rehetra; tsy nisy nilaza ny fananany hoe azy, fa niombonany daholo ny zavatra rehetra. 33Tamin-kery lehibe no nanamarinan'ny Apostoly ny nitsanganan'i Jesoa Tompo tamin'ny maty, ary fahasoavana be no teo amin'izy rehetra. 34Tsy nisy mahantra teo amin'izy ireo, satria izay rehetra nanan-tany na trano, dia nivarotra azy sy nitondra ny vidin'izay lafo, 35ary nametraka azy teo an-tongotry ny Apostoly, ka nozarazaraina tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. 36Nisy levita anankiray atao hoe Josefa izay nomen'ny Apostoly anarana hoe Barnabe (izany hoe zanaky ny fanalana alahelo), teraka tany Sipra: 37nanan-tany izy, ka namidiny, dia nentiny ny vidiny sy napetrany teo an-tongotry ny Apostoly. >